Latest News on craig ervine - ANI News - Asia’s Premier News Agency
Search For "craig ervine"
Zimbabwe's Sean Williams to step away from international cricket:
Harare [Zimbabwe], August 26 (ANI): Veteran Zimbabwe batsman Sean Williams has intended to step away from international cricket after the team's upcoming tour of Ireland.
Brendan Taylor, Ervine, Williams return as Zimbabwe name squad for
Harare [Zimbabwe], August 20 (ANI): Craig Ervine, Brendan Taylor, and Sean Williams returned as Zimbabwe announced an 18-man squad for white-ball series against Ireland and Scotland.
Zim vs Ban, only Test: Sean Williams, Craig Ervine asked to self-i
Harare [Zimbabwe], July 6 (ANI): Zimbabwe players Sean Williams and Craig Ervine are likely to miss the one-off Test against Bangladesh after the duo was asked to self-isolate.
No Brendan Taylor, Craig Ervine in Zimbabwe Test squad for Afghani
Harare [Zimbabwe], February 17 (ANI): Brendan Taylor and Craig Ervine have missed out as Zimbabwe named a 15-member squad for the two-match Test series against Afghanistan on Tuesday.
Liton Das guides B'desh to T20I series sweep over Zimbabwe
Dhaka [Bangladesh], Mar 11 (ANI): Liton Das played a knock of runs as Bangladesh defeated Zimbabwe by nine wickets in the second T20I of the two-match series on Wednesday here at the Shere Bangla National Stadium.
We should have scored at least 400 in first innings: Zimbabwe skip
London [UK], Feb 25 (ANI): After facing defeat in one-off Test against Bangladesh, Zimbabwe skipper Craig Ervine said his side, having batted first, should have scored at least 400 runs against the hosts.
Ervine's century enables Zimbabwe to post 228/6 against Bangladesh
Dhaka [Bangladesh], Feb 22 (ANI): Skipper Craig Ervine's century guided Zimbabwe to post a total of 228/6 after the end of the first day's play in the one-off Test against Bangladesh at Shere Bangla National Stadium here on Saturday.
Craig Ervine to captain Zimbabwe against Bangladesh in one-off Tes
Harare [Zimbabwe], Feb 10 (ANI): Zimbabwe Test squad against Bangladesh will be led by Craig Ervine in the absence of regular skipper Sean Williams.
Ervine's unbeaten ton helps Zimbabwe win Day 1 honours of Col
Colombo [Sri Lanka], July 14 (ANI): A brilliant unbeaten century from Craig Ervine helped Zimbabwe reach 344-8 on the opening day of the lone Test against Sri Lanka at the R. Premadasa Stadium on Friday.